သားသမီး ၈ယောက်ရှိသော်လည်း တစ်ယောက်မှပြန်မကြည့်တာကြောင့် ရေသန့်ဗူးရောင်းနေရတဲ့ အဖွားကို အိမ်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ ကိုပူတူး – Maythadin
သားသမီး ၈ယောက်ရှိသော်လည်း တစ်ယောက်မှပြန်မကြည့်တာကြောင့် ရေသန့်ဗူးရောင်းနေရတဲ့ အဖွားကို အိမ်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ ကိုပူတူး
May Thadin | December 20, 2021 | News | No Comments
ကိုပူတူး ရဲ့ ကူညီလှူဒါန်းပေးမှုနဲ့အတူ အိမ်ကလေးတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလို့ ကိုပူတူး ကိုဖက်ပြီး ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာနေတဲ့ အဖွား…
အဖွား အသက် (၇၄)နှစ်
စိတ်ဝေဒနာသည် မြေးလေးနှင့် နေပါတယ်
သားသမီး (၈)ယောက်ရှိပါတယ်…တယောက်မှ မကြည့်ပါ
အဖွား အိမ်လစာ တလ (၃)သောင်း နှင့် မီးဖိုး (၁)သောင်း ပေးရပါတယ်တဲ့…အကြွေးက (၂)သိန်းလောက်ရှိပါတယ်…(၁)သောင်းကို နေ့ပြန်တိုး (၃၀၀၀)ကျပ်ပေးရပါတယ်တဲ့
တခါတလေ ရောင်းရသမျှ…အကြွေး အိမ်လခ ပေးရတာနဲ့…ထမင်းမစားရတဲ့ ရက်တွေ ရှိပါတယ် သားရယ် မသေထမင်း မသေဟင်းလေး စားပြီ အသက်ရှင်နေရတာပါ
သွားတုန်းကတော့…. ရေသန့်ဗူး အားပေးမလို့ပါ ရောက်သွားတော့…..အဖွားက ငိုပြီ ပြောပြရှာတယ် သားရယ်…အဖွားတို့က သိပ်မကြာခင် လမ်းဘေးရောက်တော့မှာ အိမ်ရှင်ကလဲ ရောင်းတော့မှာတဲ့…ရောင်းရင် အဖွားတို့ ဆင်းရမှာ
အဖွား ညတ်ိုင်း စိတ်အေးလက်အေး မအိပ်ရဘူး…အဖွားမှာ အကြွေးတွေက မီးလိုတောက်လောက်နေရပါတယ် အင်း…လာ ထ အဖွား…အဖွား အိမ်သွားကြည့်ချင်တယ် ဗျာ သားလိုက္လို့ရမလား ??ရတာပေါ့ သားရယ်….အိမ်ရှင်နဲ့ တွေ့ စကားပြောပြီ….အဖွားကို အဖွားနမည်နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီ…ဝယ်ပေးလ်ိုက်ပါပြီ
အဖွား မှာ ပျော်လို့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ဖက်ပြီ ငိုရှာတယ် သားရယ်…အဖွား တသက် အိမ်ပိုင်ရမယ်လို့ တခါမှ မမျှော်လင့်ရဲဘူး…အိမ်မက်တောင် မမက်ခဲ့ဘူးခု ဒီအိမ်က အဖွား အိမ်ကြီး ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့…
အဖွား စိတ်အေးလက်အေး…အိမ်ပိုင်လေးမှာ ခေါင်းချနိုင်ပြီပေါ့နော် အဖွား လမ်းဘေး မရောက်တော့ဘူး ဒါပေါ့ အဖွားရဲ့ ဒါ အဖွားအိမ်ဖြစ်သွားပြီ…အိမ်စာချုပ်လေး သေချာ သိမ်းထားနော် အဖွား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သားရယ်…အဖွားရဲ့ သားမြေးလေး အဖြစ်နေပေးပါနော် ဒါပေါ့…သားက အဖွားရဲ့သားပဲ…အမြဲ အဖွားရဲ့ သားနော်
(ကျနော်နှင့်အတူ ပူပေါင်းကူညီလှူဒါန်းပေးကြတဲ့ (၇)ရက်သားသမီးများအား…အဖွားကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် )•အော…အဖွားရယ်…ခုတော့ လုံခြုံသွားပါပြီ ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက
ကိုပူတူး ရဲ႕ ကူညီလႉဒါန္းေပးမႈနဲ႕အတူ အိမ္ကေလးတစ္လုံး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရလို႔ ကိုပူတူး ကိုဖက္ၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ဝမ္းသာေနတဲ့ အဖြား…
အဖြား…အိမ္ပိုင္ေလးမွာ…ေခါင္းခ်နိဳင္ၿပီေပါ့ေနာ္ အဖြား အသက္ (၇၄)ႏွစ္စိတ္ေဝဒနာသည္ ေျမးေလးႏွင့္ ေနပါတယ္ သားသမီး (၈)ေယာက္ရွိပါတယ္…တေယာက္မွ မၾကည့္ပါ အဖြား အိမ္လစာ တလ (၃)ေသာင္း ႏွင့္ မီးဖိုး (၁)ေသာင္း ေပးရပါတယ္တဲ့…..
အေႂကြးက (၂)သိန္းေလာက္ရွိပါတယ္…(၁)ေသာင္းကို ေန႕ျပန္တိုး (၃၀၀၀)က်ပ္ေပးရပါတယ္တဲ့ တခါတေလ ေရာင္းရသမွ်…အေႂကြး အိမ္လခ ေပးရတာနဲ႕…ထမင္းမစားရတဲ့ ရက္ေတြ ရွိပါတယ္ သားရယ္ မေသထမင္း မေသဟင္းေလး စားၿပီ အသက္ရွင္ေနရတာပါ
သြားတုန္းကေတာ့…. ေရသန့္ဗူး အားေပးမလို႔ပါ ေရာက္သြားေတာ့…..အဖြားက ငိုၿပီ ေျပာျပရွာတယ္ သားရယ္…အဖြားတို႔က သိပ္မၾကာခင္ လမ္းေဘးေရာက္ေတာ့မွာ
အိမ္ရွင္ကလဲ ေရာင္းေတာ့မွာတဲ့…ေရာင္းရင္ အဖြားတို႔ ဆင္းရမွာ အဖြား ညတ္ိုင္း စိတ္ေအးလက္ေအး မအိပ္ရဘူး…အဖြားမွာ အေႂကြးေတြက မီးလိုေတာက္ေလာက္ေနရပါတယ္ အင္း…လာ ထ အဖြား…အဖြား အိမ္သြားၾကည့္ခ်င္တယ္ ဗ်ာ
သားလိုကႅိဳ့ရမလား ??ရတာေပါ့ သားရယ္….အိမ္ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ စကားေျပာၿပီ….အဖြားကို အဖြားနမည္နဲ႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီ…ဝယ္ေပးလ္ိုက္ပါၿပီ အဖြား မွာ ေပ်ာ္လို႔ မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ ဖက္ၿပီ ငိုရွာတယ္ သားရယ္…အဖြား တသက္ အိမ္ပိုင္ရမယ္လို႔ တခါမွ မေမွ်ာ္လင့္ရဲဘူး…အိမ္မက္ေတာင္ မမက္ခဲ့ဘူး
ခု ဒီအိမ္က အဖြား အိမ္ႀကီး ျဖစ္သြားၿပီဆိုေတာ့… အဖြား စိတ္ေအးလက္ေအး…အိမ္ပိုင္ေလးမွာ ေခါင္းခ်နိဳင္ၿပီေပါ့ေနာ္ အဖြား လမ္းေဘး မေရာက္ေတာ့ဘူး ဒါေပါ့ အဖြားရဲ႕ ဒါ အဖြားအိမ္ျဖစ္သြားၿပီ…အိမ္စာခ်ဳပ္ေလး ေသခ်ာ သိမ္းထားေနာ္ အဖြား
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သားရယ္…အဖြားရဲ႕ သားေျမးေလး အျဖစ္ေနေပးပါေနာ္ ဒါေပါ့…သားက အဖြားရဲ႕သားပဲ…အၿမဲ အဖြားရဲ႕ သားေနာ္ (က်ေနာ္ႏွင့္အတူ ပူေပါင္းကူညီလႉဒါန္းေပးၾကတဲ့ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားအား…အဖြားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ )
•ေအာ…အဖြားရယ္…ခုေတာ့ လုံၿခဳံသြားပါၿပီ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး အဖိုးအဖြားမ်ားအတြက္ အတူအကြ ပူးေပါင္း ကူညီလႉဒါန္းလိုပါက ကိုပူတူးႏွင့္ေဘာ္ဒါမ်ား09-5408437
ရန်ကုန်ကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်မယ့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတိပေးချက်(ရုပ်သံ)